7 Zvemukati Zvekushambadzira Matanho Anokurudzira Kufarira uye Kugovana | Martech Zone
Zvimwe zvemukati zvinowanzoita zvirinani kupfuura zvimwe, kuhwina zvimwe zvikamu uye nekumwe kutendeuka. Zvimwe zvemukati zvinoshanyirwa uye zvinogoverwa kakawanda, kuunza vanhu vazhinji uye vatsva kuchiratidzo chako. Muzhinji, izvi zvidimbu zvinoita kuti vanhu vaone kuti mhando yako ine zvinhu zvakakosha zvekutaura uye meseji dzavanoda kugovana. Iwe unogona sei kukudziridza huvepo hwepamhepo hunoratidza hunhu hunoita kuti mutengi ave nechivimbo? Rangarira aya maratidziro paunenge uchigadzira yako yemukati nzira yekutengesa:
Ratidza Hunyanzvi Hwako
Imwe yedzakanakisa nzira dzekuhwina vangangove vatengi kuvimba ndeyekuratidza kuti, kana vakasarudza iwe, ivo vanove vari vanokwanisa maoko. Gadzira zvemukati zvinoratidza kuti unonyatso ziva neako indasitiri. Nyora zvinyorwa pamusoro pemaitiro ekupedzisira akanakisa. Tsanangura kuti nei imwe nzira iri pamusoro peimwe. Gadzira chinyorwa chinyorwa chinoratidzira zvakajairika zvikanganiso uye maitiro ekuzvidzivirira. Aya marudzi ezvimedu anoratidza tarisiro yako yekuti iwe unoziva zvauri kutaura nezvazvo uye kuti iwe unogona kuvimbwa kuti unovaitira zvakanaka
Gadzira Zvemukati Zvinopindura Zvaunoda Vaverengi
Kana vanhu vatanga kutarisa zvirimo pane yako saiti, zvinowanzoitika nekuti vane mubvunzo chaiwo wavanoda kupindurwa. Gadzira zvemukati zvinokwanisa kupindura mibvunzo yako yezvaunotarisira uye zvinogona kuvabatsira kuona maitiro ekugadzirisa matambudziko avo. Semuenzaniso, zvingangoita kuti mumwe munhu arikunzwa nenyaya nemhepo yake inodzikamisa anokwanisa kuverenga pamusoro pezvikonzero zvakajairika zveanodzimisa mhepo kufema mhepo inotonhorera asati atanga kuyedza kusarudza kambani yeHVAC kuti ibude izoshandira hurongwa hwayo. . Nekuva iwe kuti upindure mubvunzo wake, waratidza hunyanzvi hwako uye kuda kumubatsira nenyaya yake.
Vanhu vanowanzovimba nechiratidzo chinopa mhinduro kumibvunzo yakajairika nenzira yakatwasuka uye inobatsira, pasina kuita kuti munhu apururudze kuburikidza nematani ezvinyorwa kuti awane zvishoma zvavanoda. Nekupa vatengi vako izvo zvavanouya kunzvimbo yako kuti vawane, unogona kuzviita zvingangoita kuti, kana vakada chigadzirwa kana sevhisi, yako ndiyo ichave yavanosarudza.
Ita shuwa kuti iwe unogona kutsigira chero zvirevo zvaunoita iwe. Semuenzaniso, usangoti iwe une yakanyanya kukwikwidza mitengo munzvimbo yako. Gadzira chati kana infographic iyo inofanidza yako mareti kune vako vakwikwidzi '. Dzorera kumusoro zvirevo zvekugutsikana kwevatengi nemakotesheni kubva kuzvipupuriro kubva kune vanofara vatengi. Chirevo chisina chinhu pasina chero chinhu chekutsigira chingangoregeredzwa kana, zvakatoipisisa, kuita kuti muverengi anetseke. Kana iwe uchikwanisa kutsigira zvese zvirevo zvaunoita neuchapupu, zvinoratidza kuti iwe uri akatendeseka uye kuti iwe unokodzera kuvimba kwavo uye nebhizinesi ravo.
Ratidza Vaverengi Kuti Uri Kuteerera
Midhiya midhiya ndeyehukama mune zvakasikwa. Isu tese tine edu emabhokisi esipo, kunyangwe vateereri vedu iboka rezviuru kana denderedzwa diki remhuri neshamwari. Paunotumira online, uri kuita hurukuro. Ratidza zvaunotarisira uye vatengi zvaunoteerera pamwe nekutaura.
Tarisa makwara ako ehukama nezvakataurwa nezvechako. Verenga zvirevo pamablog ako. Ona izvo vanhu vari kufara nezvazvo uye, zvakanyanya kukosha, izvo zvavasiri. Kana zvakakodzera kuti udaro, gadzirisa zvinonetsa vatengi pane yako blog kana ako masocial network nzira. Kana vanhu vakaona kuti mucherechedzo unoteerera, vari mukana wekunzwa kuchengetedzeka kuisa chiratidzo ichocho kubhizinesi ravo.
Taura Nehukama Hwevanhu
Kana isu tichiona kuti vamwe, kunyangwe vari vanhu vatinoziva isu pachedu kana kwete, vakave neruzivo rwakanaka nechiratidzo, isu tinokwanisa kuvimba nemashoko avo kupfuura zvirevo zvechiratidzo zvacho. Kurudzira vashandisi kuti vasiye wongororo uye votora izvi mune zvako zvemukati pazvinenge zvakakodzera. Aya makomendi kubva kune vatengi chaivo anogona kuita kuti vamwe vanzwe kusununguka kutora pombi uye kuita bhizinesi neako brand.
BuzzSumo yakaongororwa 2015 mazhinji ehutachiona zvinyorwa pama network aisanganisira Twitter, Facebook, uye LinkedIn. Uye, mamwe eanonyanya kuzivikanwa aive aya aive nechimwe chinhu chekupenga. Vanhu vakaita zvakanaka kune zvakatumirwa zvaisanganisira zvinofadza uye nyaya dzakanaka nezve vanhu. Ivo zvakare vangave vaigovana nyaya dzaive nenharo kana kuvhundutsa neimwe nzira.
Paunenge uchigadzira zvemukati zvebhizimusi rako, funga nezvenzira iyo chimwe chipo chinogona kuita kuti vaverengi vako vanzwe. Vangangodaro vanoshamiswa here kana kuseka? Vachazvibatanidza nevanhu mune imwe nyaya here? Aya marudzi ekuita anoita ako ezvinyorwa zvinopihwa zvinzwe zvakanyanya kukodzera uye zvemunhu. Idzi ndidzo mhando dzenyaya dzinogona kuwana makomendi uye masheya.
Chako chiratidzo chinoshanda nevatengi voga kana mabhizinesi madiki? Kune vamwe vatengi vanoti zvigadzirwa zvako kana masevhisi ave achivabatsira munzira huru? Iwe unayo vatengi vanoshamisa mune yavo vega? Funga kugadzira vhidhiyo kana blog zvemukati nezve avo vatengi nyaya. Kutarisa pamunhu kunopa vanhu mumwe munhu wekutaura naye. Ivo havazoona hazvo chigadzirwa chako muhupenyu hwako kana ukangovapa iwo runyorwa rwezvinhu. Nekuratidza kuti yakabatsira sei kana kusimudzira zviitiko zveumwe munhu zvezuva nezuva, unogona kubatsira vatengi vako kuona kuti chigadzirwa chako chingavabatsira sei.
Kana zvemukati zvako zvikagovaniswa, iwe unotora chako chiratidzo pamberi pevangangove vatengi vangangodaro vasina kumbozviona. Uye, iwe unowana humbowo hwemagariro hunobva pakurudziro yemunhu. Vanhu vazhinji vanonzwisisa zvakanyanya kana zvasvika kune zvemukati zvavanogovana. Mushure mezvose, mugove iwo chibvumirano chakazara cheizvo zvemukati zvirimo. Nekugadzira izvo zvemukati zvinomutsa kufarira uye nemanzwiro uku uchiratidza kuti rako hositi rakakodzera kutariswa kwavo uye kuvimba kwavo, unogona kuwedzera zvikamu zvako, kuvaka hukama hwakasimba uye nekuona kubatsirwa kwezviri mukati zvinoshanduka.
Tags: Content Marketingzvemukati zvinogovanaManzwirohunyanzvikuwedzera zvikamu zvevanhuwedzera kuvimbakukurudzira kuvimbaachiteererapachedumugovevaratidzemumagariro uchapupuvaudzekuvimba
Alex Membrillo ndiye CEO we Kadhinari Webhu Mhinduro, mubairo unohwina dijitari wekushambadzira agency iri muAtlanta, GA. Anonzi Technology Association yeGeorgia (TAG) 's 2015 Dhijitari Meter yegore, maitiro ake matsva kushambadziro yedhijitari akachinja iyo indasitiri uye akaunza mhedzisiro inoshamisa kune vatengi veese saizi nemisika. Kadhinari anga ari katatu-nguva zvakateerana kudomwa pa Inc. 3 runyorwa rweanokurumidza kukura pachivande-akabatwa makambani eUS.